एभिन्युज टेलिभिजनप्रधानमन्त्री तीन दिन अस्पतालमा नै रहने, विदेश लान नपर्ने - एभिन्युज टेलिभिजन
प्रधानमन्त्री तीन दिन अस्पतालमा नै रहने, विदेश लान नपर्ने
12 Kartik 2075 Monday 11:36 am प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौँ : दशैंपछि विरामी भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सोमबार बिहानै अस्पताल भर्ना गरियो । उनको छातीमा संक्रमण बढ्नुका साथै सुगरको मात्रा समेत बढेका कारण स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि सोमबार बिहान २ बजे अस्पताल भर्ना गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको उपचारका लागि डा. दिव्या सिंह, डा. अरुण सायमि र डा. उत्तमकृष्ण श्रेष्ठ खटिएका छन् । रुघाखोकी लागेर छातीमा संक्रमण हुनुका साथै रगतमा सुगरको मात्रा समेत बढेपछि अहिले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन इन्सुलिन दिइएको छ । त्यसैगरी एन्टिबायोटिक इन्जेक्सनबाट दिइएको छ ।
डा. सायमिका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भएको हो । यसो हुँदा छाती घ्यारघ्यार हुने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ । त्यही भएर सावधानी अपनाउन अस्पताल ल्याइएको हो ।
यसअघि शुक्रबार मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र्पुयाइएका प्रधानमन्त्रीलाई अस्पतालमा नराखी घरमै आराम गर्न पठाइएको थियो । तर स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि उनलाई त्यही अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो । अस्पताल ल्याउनुअघि उनलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नै उपचार गरिएको थियो । स्थिति थप जटिल भएपछि मात्र अस्पताल लगिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिसियुमा राखेर उपचार गरिराखिएको छ । तर चिकित्सकहरुले सिसियुमा पनि राख्ने अवस्था नभएको दावी पत्रकार सम्मेलनमा गरिएको थियो । ‘सिसियुको जरुरत नभए पनि सिसियुको भित्र राखेका हौँ, भोलिसम्म स्थिति सामान्य अवस्थामा आउँछ’, उनीहरुले भने ।
चिकित्सक सायमिले प्रधानमन्त्रीको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताउँदै तत्काल विदेश लैजानु पर्ने अवस्था नरहेको पनि जानकारी दिए ।